Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Wareysigii Ugaas Maxamed Ugaas Guure Ugaas Guuleed ” Aan noqono ul iyo Diirkeed”
Wareysigii Ugaas Maxamed Ugaas Guure Ugaas Guuleed ” Aan noqono ul iyo Diirkeed”
October 20, 2011 - Written by xaajocom - Edited byxaajo
XOL:Sidaan horey idiinku balanqaadney waxaan halkan idiinku soo gudbineynaa wareysigii aan bishan Oct badhtankeedii magaalada Nairobi kula yeelanay Ugaas Maxamed xilli uu halkaas u joogey kulan caalami ah oo uu ka qaybgalayay. Wareysigii ayaa sidan udhacay.
XOL:Ugaas marka hore adigoo mahadsan kusoo dhawoow warbaahinta Xaajo.
Ugaas Maxamed: Aadbaan umahadsantahay, waana dhawahay.
XOL:Ugaas waxaad ugu horeyn nooga warantaa Goortii lagu caleemo saarey iyo meeshii lagugu caleemo saarey?
Ugaas Maxamed: Waxaa la icaleemo saarey sanadkii 2002 waxaana la igu caleemo saarey dagmada Gurre Dhaamoole, banaanka Bakool Weyne, goobta Gadiire oo ah meel caan ah meeshaas ayaa la igu caleemo saarey sidaasaana kula wareegey xilka Ugaasnimada beesha.
Ugaas Maxamed: Sidaan ognahay caleemo saarku waqti buu socdaa, bal nooga waran muddadii aad meesha fadhideen iyo qaabkii caleemo saarku udhacay?
Ugaas Maxamed: Runtii waa sax arintaas, muddo saddex bilood ah ayaa meeshaas la fadhiyey laguna xoola qalanayay waxaana isugu yimid dad aad ubadan oo kakala yimid daafaha dunida.
XOL: Maxaa dareentey markii lagugu wareejiyey xilkaas Ugaasnimada ah ee beeshaas idil adigoo aad u da yaraa?
Ugaas Maxamed: Horta illaahay mahaddii waa masuuliyad aad uwayn balse markii la ii caleemo saarey maadaama oo aan yaraa da ahaan maan ogeyn baaxadda iyo masuuliyadda xilkan balse illaahay mahaddii maanta waan garanayaa si wanaagsan waana mid ubaahan taxaddar dheeri ah iyo illaalin badan.
XOL: Imisa jir ayaad ahayd markii lagugu caana shubey, maxaase keeney in adigoo ay jiraan walaalahaa oo kaa wayn adiga lagu caleemo saaro?
Ugaas Maxamed: Waxaan jirey 19 sano markii la icaleemo saaray waxaana ahaa wiilka ugu yar Sagaal oo uu aabahay dhalay. Sababta keentey in aniga oo ugu yar la icaleemo saaro waxey ahayd aabbahay illaahay ha unaxariistee ayaa ka dardaarmey arintaas, tolkuna waxey maqleen oo ay ixtiraameen taladii iyo dardaarankii aabo sidaasaana la igu caleemo saarey.
XOL: jaranjarta Ugaasnimadu imisay qoyskiina la taallay oo la dhaxlayay,s idee ayaadse ushaqeyaa mararka aad xalineysaan khilaafaadyada?
Ugaas Maxamed:Anigu waxaan ahayn qofkii 19aad ee loo booskan loo caleemo saaro waana arin dhaqanka iyo isku dhiibkaas ku saleysneyd. Aniga waxaa ila shaqeeya 70 0day oo iyagu iiga fara dhuudhuuban hawl maalmeedka beesha iyagaana inta badan xaliya hawlaha. Aniga waxii isoo gaadha waa uun hawl adag oo goaan ubaahata.
XOL:Bal magaalada Gurre Dhaamoole nooga waran, dad yar ayaa yaqaana inta aragtey mooyee, maxaase ubaahan tahay magaaladu dhanka hormarka?
Ugaas Maxamed: Gurre Dhaamoole waa magaalo kheyraad badan kana tirsan gobolka Afdheer waxeyna caasimadda Hargeele u jirtaa qiyaastii 320 KM. Magaaladani waxey hodan ku tahay khayraadka dabiiciga ah sida xabagta kala duwan,xoolaha nool iyo Malabka. Dhanka hormarka magaalada waxaa haysa jid la aan marka la aadayo Hargeele waxaana dhacda in 3 habeen loo dhaxo magaalada Hargeele marka in jid loo sameeyo isku xidha gobolka Afdheer waa muhiim waana gaadhi doonaa Insha Allaah.
XOL: Intii lagu caleemo saaray maxaad qabatay oo aad isleedahay illaahay wuu ku garab galay hirgalinteeda,?
Ugaas Maxamed: Illaahay mahaddii waxaan ku guuleystey inaan damiyo colaad beeleed ka taagney deegaanka Gurre Dhaamoole oo udhaxeysay beesha Dhaweed iyo Gurre waana illaahay mahaddii inaan ku guuleysanay xallinteeda.
XOL: Xaaladda Deegaanka ee guud bal nooga waran intaad kala socoto?
Ugaas Maxamed: Deegaanka xaaladdiisa aadbaan ula socdaa waxaana aad ugu faraxsanahay una taageersanahay maamulka iyo xukuumadda Deegaanka ee hadda ka arimisa waxaana illaahay ka baryayaa inuu nagu sugo walaalnimo iyo hormar iyo nabadgalyo joogta ah. Waxaan leeyahay waa inaan ul iyo diirkeed noqonaa oo aan gacmaha is qabsano deegaan iyo dad ahaanba sidaasaan wax kuwada qabsan karnaa kuna hormari kareynaa.
XOL: Inkastoo aad tahay oday dhaqameed, miyaad siyaasadda deegaanka wax ka dhahdaan ama ka shaqeysaan marka loo baahdo?
Ugaas Maxamed: Aniga iyo ragga ila midka ahi waxaan bulshada u taaganahay doorka dhaqanka, waxii siyaasad ahna waxaa ku jira wiilasheena iyo kuwaan dhalay iyagaan uga danbeynaynaa, ugu duceyneynaa ugana dambeyneynaa. Illaahay ayaa noo qaybiyay xilalka waana muhiim inaan is garab taagno wiilasheena .
XOL:Hadda Kenya ayaad joogtaa, maxaad utimid halkan?
Ugaas Maxamed: Halkan waxaan u imid kulan muhiim ah oo la xidhiidha dhaqanka deegaanka oo aan kasoo qaybgalay waxaana gudbinayay fikirka deegaanka iyo nolosha ree guuraaga iyo sidii loo hormarin lahaa.
XOL:Sidaan ka warheyno, beesha aad Ugaaska u tahay tiro badan oo kamid ahi waxey ku nooshahay waddanka Kenya iyaga ma arkeysaa intaad Kenya joogto?
Ugaas Maxamed: Kulankan aan kenya u imid kadib waxaan u nagaadey inaan la kulmo beesha waana la kulamaya waxaana kala hadli doonaa sidii waddanka loo hormarin lahaa loona maalgashan lahaa iyaguna danahooda u qabsan lahaayeen, isuguna duubnaan lahaayeen.
XOL: Maxaad leedahay Dawladda Deegaanka Soomaalida iyo Bulshada deegaanka udhalatey ee akhrin doonta wareysigaagan.?
Ugaas Maxamed: Ugu horeyn waxaan Xukuumadda Deegaanka Soomaalida ee hormuudka ka yahay Mudane Cabdi Maxamuud Cumar aan leeyahay wuu ku mahadsanyahay dadaalka iyo hormarka uu deegaanka ka sameeyey intii uu xilka ka hayay. Haddii aan nahay oday dhaqameedyadana abaalweyn ayaan u haynaa sidii uunoola shaqeeyey intii uu xilka hayay haddii aan nahay oday dhaqameedyada Deegaanka Soomaalida.
Waxa kaliya ee aan xukuumada ugudbin lahaa gaar ahaan madaxweynaha talo ahaan in Ugaasyada iyo hoggaamiyaasha bulshada ee Deegaanka Soomaalida loo sameeyo iney sanadkii ama labadii sano mar is arkaan, wadatashadaan, wax isweydiiyaan waxna iska bartaan si ay laftigoodu qayb uga qaataan hormarka iyo isku soo dhaweynta bulshada iyo xalinta khilaafaadka.
Dadka akhrin doona wareysiganna waxaan leeyahay meelkasta oo ay joogaanba Lama Huraan waa Caws Jiilaal, halkan baynu leenahay aan kawada shaqeyno hormarinteeda, walaalnimadeena iyo wadajirkeena illaahayna aan barino.
XOL:Mahadsanid Ugaas aadbaan ugu faraxsanahay kulankaagan muhiimkan ah
Ugaas Maxamed: Waad mahadsantihiin waqtigiina waxaana wanaagsanaan lahayd inaan waddankeena ku kulano